Sidee loo bakteeriyaa qaabeynta LXDE? | Laga soo bilaabo Linux
LXDE wali waa jawi desktop caan ah, inkasta oo ay da ’tahay, in kasta oo ay taasi ugu wacan tahay ma awoodi doontid inaad sameyso gurmad degdeg ah adoo dhoofinaya alaab Dconf ah.
Bedelkii, haddii aad rabto inaad ilaaliso dejinta aad ku sameysay deegaankaaga desktop desktop LXDE, waxay u baahan doonaan inay abuuraan keyd buuxa oo ah galka ~ / .config.
Si aad u awoodo inaad ka sameyso bakcup-kan LXDE Waxaan ku sameyn karnaa annaga oo abuureyna feyl isku dhafan oo faylka la yiri si aan si dhakhso leh oo hufan ugu keydinno nuqulkan.
Kadibna kaliya socodso amarka soo socda si aad u sameyso:
Sababtoo ah marka la sameynayo keydkan waxaa ka mid ah dejinta deegaanka, iyo sidoo kale daalacashada iyo arrimaha ku jiri kara macluumaad xasaasi ah waxaan ku dari karnaa tillaabo amni nuqulkan, si aan u ilaalino xogta keydsan.
Nidaamkani wuxuu noqon karaa ikhtiyaari.
Marka taas waxaan isticmaali doonaa qalabka GnuPG, oo aan ku rakibi karno amarrada soo socda
Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo noocyo kala duwan:
Sameeyay soo dejinta waxaan dooneynaa inaan ku qabanno sirta feylkaan amarka soo socda:
Halkan waa inay ku dhammaystiraan codsiga lambarka sirta ah ee ka muuqda xaruntooda si ay u dhammaystiraan hawsha sirta.
Marka taas waa inay ku meeleeyaan erey sir ah oo ay ku xasuustaan ​​oo fiican. Marka sirtu dhammaato, waxaad ku arki doontaa backup.tar.gz.gpg galkaaga guriga.
Kadib markay kaydinta u galiyaan meel aamin ah, way tirtiri karaan feylka .tar.gz ee u adeegsaday aasaaska sirta.
1 Mawduucyada iyo astaamaha kaabta
1.1 Soo celinta kaydinta
Mawduucyada iyo astaamaha kaabta
Sida aad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato, qayb ka mid ah qaabeynta iyo muuqaalka muuqaalka jawiga miisaska ayaa ah mawduucyada iyo astaamaha, sidaas darteed waan ku soo celin karnaa habka soo socda.
Waa inay ogaadaan inay jiraan laba wado oo suurtagal ah halka ay ku keydsan yihiin, halka ugu badan ay tahay midka ku dhexjira galka "/ usr" ee salka u ah nidaamka faylka. Meel kale oo ay inta badan leedahay waa gudaha galka shaqsiyeed ee "/ guriga".
Waa ku filan tahay inay raadsadaan fayllada ay ku jiraan faylku inay kaydin doonaan.
/ usr / share / icons y / usr / share / mawduucyada ama ~ / .magaalada iyo ~ / .magaalada.
Ya adigoo og wadada meesha astaamahaaga iyo astaamahaagu ku kaydsan yihiin, fuliyaan amarka soo socda ku beddelashada "waddada" waddada aad ku kaydisay wixii aad kaydsan lahayd:
Hadda oo dhammaan mawduucyada gaarka ah iyo astaamaha ay ku jiraan faylasha TarGZ, lKaydinta waa la dhammeeyaa faylasha la cadaadiyeyna waa la keydin karaa daruurta dhexdeeda, USB-ga diskiga kale ee adag ama wax kastoo ay maanka ku hayaan inay ku sameeyaan.
Ugu dambeyntiina, inaad dib u soo celin karto qaabeyntaada nidaam cusub ama haddii aad go'aansatay inaad la wadaagto qof kale ama kombiyuutar kale, Waa inay soo dejistaan ​​ama ku xirmaan aaladda meeshii ay ku keydinayeen faylalka la duubay.
Si aad u kala furfurto ugana furfurto LXDE bakup waa inaad qortaa amarka soo socda:
Halka lagaa codsan doono lambarka sirta ah ee laguu diray. Markii ladiro, hada waxaan usoconaa inaanu galka kuugu soo celino galka gurigaaga adoo wata amarka daamurka.
Kadib dib u soo celinta feylasha qaabeynta, ka saar feylasha astaanta iyo feylka mawduuca daamur
Xaaladda icons, isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa
Haddii ay weydiisato rukhsad, waxay ku darayaan sudo habka soo socda:
Marka astaamuhu meesha ku jiraan, desktop-kaaga LXDE waxaad u baahan doontaa inaad dib u bilowdo nidaamkaaga si isbedelada feylasha qaabeynta ay ugu shuban yihiin bilowga iyo isticmaalaha nidaamkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo bakteeriyaa qaabeynta LXDE?
Macluumaad wanaagsan oo ku saabsan qaabeynta LXDE
Jawaab Bill Emia